Ahoana no nahombiazanao tamin'ny fananganana backlinks tamin'ny tranokalanao natoraly?
Mazava ho azy fa tsy ny fanontaniana hoe ny fametrahana rohy mankany amin'ny tranokalanao dia anisan'ireo singa fototra hahombiazan'ny Search Engine Optimization. Fantatra ihany koa fa misy fomba maro samihafa hanatanterahana tetik'ady fanorenana mifandraika. Inona anefa no dikan'ny hoe mamadika ny rohy mankany amin'ny tranonkala ny fomba voajanahary? Eny, miankina izany. Raha ny amiko, mino aho fa ny fahombiazako vao haingana amin'ny famolavolana rohy voajanahary dia tena nahomby. Noho izany, andeha hojerentsika - ny fanorenana backlinks dia midika ho "filalaovana maimaim-poana", nefa tsy manambany sy manitsakitsaka ny toro-làlana webmaster an'ny Google.Ary hijery fijerena fohy aho mikasika ireo fomba amam-panao mamaivay indrindra sy mampidi-doza "tsy ara-boajanahary" amin'ny fananganana rohy (tokony hisoroka azy ireo amin'ny fomba rehetra!). Manantena aho fa ho hitanao fa azo ekena izy ireo amin'ny fananganana backlinks amin'ny tranokalanao - ny fomba tsara indrindra azo atao.
Mitandrema ny famerenana tranonkala mankany amin'ny tranonkalanao miaraka amin'ny:
Fifanakalozam-baovao mifamaly sy kodiarana
Ny fampiasana ny rindrambaiko ankamantatra indrindra, kanefa tokony mbola tokony hesorina izany - voalohany indrindra. Ary misy ny sehatry ny tranonkala maro sy ny rindrambaiko ety anaty aterineto hafa manolotra fifanarahana amin'ny rohy barre. Mazava ho azy, ny fifanakalozan-dresaka miaraka amin'ireo mpitoraka blaoginao hafa dia mety ho hevitra tena tsara. Na izany aza, mifampiraharaha amin'ny fifandraisana amin'ny fifandraisana amin'ny fifandraisana fifandraisana, ary koa ny kodiarana mifamadika (a. K. ny. piramida amin'ny fanorenana rohy) matetika dia miteraka entana goavam-be mitana rindran-damina be loatra, izay tsy ho ela. Midika izany fa ny fandefasana ny fifanakalozana fifandraisana na ny kodiarana dia tena mandany fotoana sy vola.
Ny zavatra bebe kokoa - ny fanaovana izany tsy tapaka dia mety ny fomba tsara indrindra hahitana fiheverana goavana eo amin'ireo fitaovam-pikarohana lehibe toy ny Google mihitsy. Ary izany dia midika fa tsy misy afa-tsy sazy mihoam-pefy mipoitra eo amin'ny tranokalanao na blôginao. Izany no mahatonga ny fifanakalozana rohy dia tsy ny fomba voajanahary amin'ny fananganana backlinks amin'ny tranokalanao, sa tsy izany?
Loharano tsy mitongilana
Ny tranokala tsy manjary na ny blôgy dia zavatra hafa izay tsy tokony hampiasaina amin'ny fananganana backlinks ny fomba voajanahary. Raha ny tena izy, raha toa ka maharesy lahatra be loatra amin'ireo loharano fahatelo izay tsy misy ifandraisany amin'ny lohahevitra na ny sehatra indostrialy ianao, dia hanome anao farafaharatsiny kely (raha tsy zero) ho an'ny PageRank anao. Na, amin'ny tranga ratsy indrindra, mety ho voasazy ihany koa ianao amin'ny Google amin'ny fijerena ireo hetsika tahaka ireo tena sarotra sy manipulative.
Toeram-pitsangatsanganana sy fialantsiny hafa
Ny fepetra ofisialy momba ny goavam-be eran-tany dia maneho hafatra mazava - mividy na mivarotra rohy Tsy azo ekena mihitsy ny toe-javatra. Izany no momba ny rohy naloa - raha mety hitranga i Google dia mahita sehatra ara-barotra amin'ny famoronana rohy profiles, dia hitondra ny hamam-piadiana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fifanarahana. Na eo aza ny valiny azo atao dia matetika no toa tsara sy voajanahary ary kalitao izy ireo, ny risika dia lehibe loatra.
Ankoatra ireo toerana mampiahiahy izay tsy hanaovanao na oviana na oviana hananganana backlinks amin'ny tranokalanao araka ny fomba voajanahary, dia manoro hevitra aho fa hikaroka lisansy momba ny lahatsary ambany toetra sy toeram-pambolena rohy. Eny, zavatra iray teo amin'ny roa taona lasa izay dia tena nahasoa azy ireo tamin'ny famokarana ravinkazo mora foana - tokony hiaiky izany aho. Fa ankehitriny, ireo rafitra ireo dia tsy miasa intsony, mazava ho azy, raha tsy hoe tena te-hahazo ny tenanao ho an'ny famaizana haingana sy matetika tsy azo avela Source .